के भन्छन् त , उपमेयरका दलित उम्मेदवारहरु ? « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » के भन्छन् त , उपमेयरका दलित उम्मेदवारहरु ?
के भन्छन् त , उपमेयरका दलित उम्मेदवारहरु ?
मुलुक स्थानीय तहको चुनावमा हुमिरहेकाे छ । उम्मेदवारहरु घरदैलो र आमसभाहरुमा व्यस्त भएका छन् । जनतासँग भोट माग्न निकै तछाड्मछाड् गरिरहेका छन् । यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निकै रोचक र गम्भिर ढंगबाट हेरिरहेका छन्, दलित समुदायहरुले । वडा सदस्यहरुमा मात्रै सिमित गर्न खोजिएका महिलाहरुलाई केही पार्टीहरुले उपमेयरमा समेत उठाएका छन् । प्रमुख पार्टीहरुले मेयरमा निकै कम उम्मेदवारहरु उठाएका छन् । वडा ,सदस्य ,गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा माथि उठेर केही पार्टीहरुले दलित समुदायका असल व्यक्तिहरुलाई मेयर र उपमेयरमा समेत उठाउन सफल भएका छन् । के भन्छन् त , उमेयरका दलित उम्मेदवारहरु ? प्रस्तुति वसन्त विश्वकर्मा /विन्दु गहतराज
शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा विकासका पुर्वधार निर्माण गर्दै जातिय विभेदमुक्त क्षेत्र बनाउछौ
सविता रसाइली दलित महिला उम्मेदवार शुक्लागण्डकी नगरपालिका (नेकपा एमाले)
प्रदेश नं ४ को शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चुनावी माहोल तिव्र रुपले अघाडी बढिरहेको छ । सबै दलहरु सँगै नेकपा एमाले पनि प्रचार–प्रसार का लागी सक्रिय रुपले चुनावि मैदानमा देखिएको छ । अन्य पार्टीहरुको तुलनामा नेकपा एमालेको यो नगरपालिकामा जित्ने संभावना प्रबल रहेको छ तेसैले मेरो जित पनि लगभग सुनिश्चित भइसकेको छ । चुनावमा टिकट पाउने कुरा प्रतिस्पर्धाको कुरा भएकाले पार्टीभित्र केहि कसरत त गर्नु नै प¥यो तैपनि पार्टीले सबल, सक्षम, क्षमतावान् र नेतृत्व गर्न सक्ने व्यतिmलाई उम्मेदवार बनाएको हुदाँ सोहि अनुुसार मेरो पनि उपमेयरमा दलित महिला उम्मेदवार परेको हो । सुरुमा स्थानीय कमिटिबाट मेरो उम्मेदवारीका लागी केहि आनाकानी जस्तो देखिएपनि स्थायी कमिटिले नै मेरो नाम सिफारीस गरेपछि मेरो उम्मेदवारी सुनिश्चित भएको थियो । मेरो पार्टीप्रतिको अत्याधिक त्याग र सर्मपणका कारण मलाई पार्टीले टिकट पाउन सहयोग नै ग¥यो टिकट पाउन खासै गाह्रो भएन दलित महिला भएपनि । सफल राजनितिक पृष्टभुमिका कारण नै उम्मेदवारी दिएको हुनाले मेरो जित पक्का भईसकेको छ । चुनाव विजय भएपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता नगरपालिकाको विकास गर्ने नै हुन्छ । नगरपालिकामा पूर्वाधार विकास गर्ने, नगरपालिकाका आम जनताको आवश्यकता पुर्ति गर्ने साथै नगरपालिकालाई सबल र सक्षम नगरपालिका बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछु । म आफै दलित महिला उम्मेदवार भएकाले विषेश योजनाका साथ दलित समुदायमा जाने तयारी गरीरहेकी छु । मेरो जितसँगै मैले दलित समुदायका लागी गर्ने पहिलो काम भनेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई जातिय विभेदमुक्त नगरपालिका बनाउनु हो । यसका साथसाथै दलित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विकाससँगै समग्र विकासमा पनि मेरो अमुल्य योगदान रहने छ । राजनीतिक, शैक्षिक र क्षमताका हिसावले म उपमेयको सक्षम उम्मेदवार हुँ दर्शना नेपाली सालिकोटतिलुगुफा नगरपालिका कालिकोट (नेकपा माओवादी केन्द्र)
कालिकोट सालिकोटतिलुगुफ नगरपालिकाका जनताहरु मलाई भोट दिएर जिताउन आतुर छन् । चुनाव जित्ने पक्का छ हाम्रो पाटिको पकड रहेको क्षेत्र हो । सिंगो पार्टी चुनाव जिताउने अभियानमा लागी रहेको छ । चुनावमा टिकट पाउनेकुरा फरक राजनीतिक र विचार संगको प्रतिस्पर्धाको कुरा भएकाले म आफँैमा राजनीतिक, शैक्षिक र क्षमताका हिसावले सक्षम कार्यकर्ता भएकाले खासै गाह्रो भएन । पहिलो आधार भनेको मेरो क्षमता, योग्यता नै हो । दोस्रो कुरा जनचाहाना र हाम्रो पार्टीले उठाएका सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्धाहरु नै हुन । कालिकोट जस्तो दुर्गम् जिल्लामा हाम्रो पार्टीले गरेका सकारात्मक कार्यले पनि जनतामा एक किसिमको प्रभाव रहेको छ । सालिकोटतिलुगुफ नगरपालिकाकामा दलित समुदायको जनसंख्या पनि धेरै रहेको छ । दलित समुदायको मत मात्र पाएपनि जित्ने संम्भावना बढि रहेको छ । अन्य समुदाय,बाहुन क्षेत्रीले पनि सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् । करिव ४ पाँच सय बाढिमतले जित्ने सम्भावना छ । नेपाली समाजमा अझैपनि अन्धविश्वास र कुुसंस्कारका कारण दलित महिला उपमेयर हुदाँ कताकतै जातीय विभेदको प्रभाव देखिदो रहेछ । तैपनि मेरो जितलाई यस्तो विभेदले खासै असर गर्नेछैन् । हाम्रो नगरपालिकामा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवाको समस्या रहेको छ खानेपानी जिुली र सडक संञ्जालले अहिले सम्म छोएको छैन म उपमेयरमा जितेपछि यिनै पुर्वधार निर्माणका क्रियाशिल रहने प्रतिबद्धता ब्यक्तहरु जनतामाझ गरेको छु । महिलाहरुलाई उद्यमशिल बनाउने खालका योजनहरु अगाढी सार्ने छु । दलित समुदायको सवलको कुरा गर्ने हो भने दलित समुदायका सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक समस्याहरु मैले भोगेको छु र गहिरो अध्ययन समेत गरेको छु । योजना बनाएर क्रमिक रुपमा दलित समुदायलाई समाजिक शैक्षिक, आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखेर दलित महिला पुरुष, बालवालिका का निम्ति विकास, रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्दै नगरपालिकाको नेतृत्व गर्नेछु । – See more at: http://dalitonline.com/archives/23463#sthash.iDGCG5ct.dpuf
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य, दलित समाचार on May 11, 2017 .
← राजधानीकै एक दलित बस्ती चुनावबारे अनविज्ञ ! स्थानिय भन्छन्, ‘चुनावको कुरा गर्न कोहि आएका छैनन’	ललितपुरकी कान्छी रञ्जुले चुनाव जितिन् सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय २३ वर्षीया रञ्जु तिलाङ्गी ललितपुर– ३ को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित विभेद अन्त्य गर्न राजनीति →